Wallet, toetr'andro ary sarintany: vaovao misimisy momba ny iOS 15 ao amin'ny WWDC 2021 | Vaovao IPhone
Wallet, toetr'andro ary sarintany: vaovao iOS 15 bebe kokoa ao amin'ny WWDC 2021
iOS 15 koa dia mampiditra vaovao amin'ny fampiharana telo voalohany: Sarintany, toetr'andro ary poketra. Samy mampiditra ny endrika famolavolana vaovao nampidirin'i Apple tamin'ity fanavaozana vaovao ity. Fa ankoatr'izay dia te-hifantoka amin'ny fampiharana iraisana telo izy ireo vaovao mahafinaritra como el sari-tany vaovao nohavaozina indray, fampahalalana bebe kokoa ao amin'ny app Weather ary ny mety hisian'ny fahazoan-dàlana hitondra fiara amin'ny app Wallet.
Fampisehoana vaovao amin'ny fampiharana iOS tany am-boalohany, ao amin'ny iOS 15 izao
Ny fampiharana Wallet nahazo vaovao marobe. Na izany aza, maro amin'izy ireo no tsy ho hitantsika any Espana, amin'izao fotoana izao. Ny iray amin'izy ireo dia ny fampidirana ny fahazoan-dàlana hamily fiarakodia ho toy ny fomba famantarana any Etazonia. Raha ny marina dia nitatitra izy ireo fa ny FSA dia mianatra ny fomba hanaovana azy hifanaraka amin'ny tena famantarana amin'ny seranam-piaramanidina. Nampidirina koa izy io fisokafan'ny varavarana misaotra ireo fanalahidy virtoaly hanokatra varavarana hotely sy ny toy izany.
Ny fampiharana Time mahazoa fampahalalana bebe kokoa miaraka amin'ny sary vaovao, fampahalalana mifandraika amin'ny rivotra, taratra UV, tsindry amin'ny atmosfera, sns. Ampidirina vola vaovao koa izay mifanaraka amin'ny toetr'andro isaky ny toerana.
Farany, Apple Maps hampiditra ireo sarintany nohavaozina ao amin'ny iOS 14 any Espana sy Portugal any amin'ny iOS 15 ary amin'ny faran'ny taona dia hanao izany koa i Australia sy i Italia. Ao amin'ny iOS 15 Nisy fomba alina vaovao nampidirina hahita ny sari-tany vaovao amin'ny fahitana kokoa. Ny fampahalalana momba ny fihaonana sarotra, fihaonan-dàlana, jiro fifamoivoizana, sns. Ho fampahalalana fanampiny, ny bus sy ny fiaran-dalamby tafiditra amin'ny fitateram-bahoaka dia ampidirina amin'ny Apple Maps ary mampitandrina antsika rehefa tokony hiala ny fitaterana isika. Mazava ho azy, ireo fiasa ireo dia tsy ho hita any amin'ny tanàna sasany toa an'i Los Angeles, New York na Philadelphia.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 15 » Wallet, toetr'andro ary sarintany: vaovao iOS 15 bebe kokoa ao amin'ny WWDC 2021
Azonao atao ny mandika lahatsoratra sy fampahalalana amin'ny LiveText ao amin'ny iOS 15